Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara Antarctic Ocean | Network Meteorology
Otu n'ime oke osimiri nke, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, bara ọgaranya na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ma nwee nnukwu ọrụ na ihu igwe ụwa bụ Osimiri Antarctic. Ejiri aha nke Oke Osimiri Southern na Southern Ocean mara ya. Ọ bụ otu n'ime oké osimiri nke a na-ewere dị ka oke osimiri dịka ọ dị n'ọnọdụ ikpeazụ. Anyị na-amata ọdịiche dị n'etiti ha na ndị ọzọ ebe ọ bụ naanị ya na mpaghara ụwa gburugburu ma gbaa ya gburugburu.
Na nke a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara niile, ọtụtụ ụdị dị iche iche na ụfọdụ ihe nzuzo nke Osimiri Antarctic.
2 Njirimara nke Atlantic Ocean
3 Mkpa akụ na ụba nke oke osimiri Antarctic
Ọ bụ oke osimiri nke dị na ndịda mpaghara ụwa anyị. Oke oke osimiri a bu na Antarctic convergence that Ọ dị ihe dị ka ogo 60 n’ebe ndịda latitude na ụsọ mmiri nke Antarctica. Dịka e kwuru na mbụ, ọ bụ naanị oke osimiri nwere ike ịgba kọntinenti gburugburu. Maka nke a, ọ kpuchiri ụsọ mmiri niile dị na kọntinent Antarctica. Ọ bụ oke osimiri nke jikọtara nnukwu ịsọ oke osimiri ndịda yana oke nke oke osimiri na mmiri miri emi karị.
Gburugburu Antarctic Ocean bu 21.960.000 square kilomita. Dị ka ọ dị n'oké osimiri ndị ọzọ dị na mbara ala, o nwekwara ọtụtụ oke osimiri dị n'ime ya. N'okwu a anyị hụrụ Osimiri Weddell, Osimiri Lazarev, Osimiri Riiser-Larsen, Oké Osimiri Amundsen, Oké Osimiri Cosmonauts, Oké Osimiri Nkwado, Oké Osimiri Davis, Oké Osimiri Bransfield, akụkụ nke ofzọ Ngabiga nke Drake, Osimiri Urville, Osimiri Somov, akụkụ nke Osimiri Scottish na Oké Osimiri Ross.
Otu n'ime ihe ka ukwuu oke osimiri nke ụwa anyị nọ ebe a. A maara ya dị ka Antarctic Circumpolar Current ma nwee mmetụta dị oke mkpa na ihu igwe. Ma ọ bụ na ugbu a nwekwara njikọ na oke osimiri ndị ọzọ ma na-emetụta ihu igwe. Ugbu a na-eburu mmiri cubic dị nde 135-145 nde kwa nkeji site na ọdịda anyanwụ ruo ọwụwa anyanwụ tinyere kilomita 20,000 Antarctic na ọsọ nke 0.5 mita kwa nke abụọ.
Isi ọrụ Antarctic Circumpolar Current bụ ikesa ikpo ọkụ niile nke oke mmiri n'etiti otu ebe na nke ọzọ na mbara ala. Ngbanwe ikpo oku a na-ebute ọdịiche dị na okpomọkụ nke ozu mmiri. A maara nke a dị ka gradient okpomọkụ. Dị ka anyị si mara, n'ihi ọdịiche dị na mbara igwe nke mmiri na ikuku, ụfọdụ mmegharị nke ifufe na-eme site na nrụgide nke ikuku. Ma ọ bụ na ifufe na-ekesa site na ebe ikuku ikuku ka ukwuu na-aga ebe na-erughị ikuku nke ikuku.
Mmeghari ndia nile nke otutu mmadu nwere na onodu di iche bu ihe nwere nnyonye anya na mmiri ozuzo na usoro mmiri ozuzo.
Njirimara nke Atlantic Ocean
Ọ bụrụ na anyị enyochaa akụkụ niile nke oke osimiri a, anyị ga-ahụ na o nwere ịdị omimi omimi site n'agbata mita 4.000 na 5.000 ma kpuchie kilomita 17.968 nke ụsọ osimiri Antarctic. Na mpaghara kacha nso Antarctic kọntinent anyị na-achọta a Ihe eji eme ihe nke bụ ihe dị ka kilomita 260 n’obosara na nke kachasị nke kilomita 2.600. N'ime mpaghara a niile, anyị na - ahụ ọtụtụ akụ na ụba na ihe ndị sitere n'okike.
Ọnọdụ oke osimiri a dị n’etiti ogo 10 na -2. N'agbanyeghị ihe ị nwere ike iche banyere obere okpomọkụ nke oke osimiri a, ọ naghị ajụ oyi kpamkpam. Ihe iche nke ice na ihu igwe nke mpaghara Antarctic pụtara na oke osimiri a enweghị oke ifufe ma ọ bụ ebili mmiri siri ike ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị iche n'etiti ha. Anyị nwere ike ịchọta n'oge oge oyi site na 65 ogo ndịda latitude site na mpaghara Pacific 55 degrees south latitude in the Atlantic Ocean area how oke osimiri a na-oyi.
Oge oyi bụ oge mmiri dị n'ụsọ osimiri Antarctica na-agbaze kpamkpam ma e wezụga na mpaghara ụfọdụ. Nnu nnu dị n’ime mmiri a dị ala karịa ka anyị na-eru nso n’ebe ugwu n’akụkụ Antarctic Convergence. N’ebe ndị a mmiri oyi na-asọkarị n'okpuru mmiri nke na-esighi oyi na-abịa site na njikọta. Ma ọ bụ na mmiri nwere okpomọkụ dị ala dị arọ ma na-agbadata na omimi. N’ụzọ dị iche, ndị nwere okpomọkụ dị elu na-agbago n’elu. Mmagharị a nke mmiri na-ebute oke osimiri.
N'ime oke osimiri a, anyị na-ahụ nnukwu nkwụnye ego carbon nwere ihe dị ka okpukpu 50 karịa ihe dị na mbara igwe.
Mkpa akụ na ụba nke oke osimiri Antarctic
Dika aturu anya ya, umu mmadu na-erite uru nke ihe okike nile di na mbara ala nke di n’ebe a. Arụpụtaghị oke oke n'ihi igwe dị ala na ìhè anyanwụ. Ọnụ ọgụgụ dị ala nke radieshon nke anyanwụ abụghị naanị n'ihi nchepụta nke ụzarị anyanwụ na-abịarute mgbe ọ dị na ọdụ ndịda, kamakwa O nwere ihe jikọrọ ya na nnukwu igwe ojii dị na kọntinent a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ oke osimiri nwere nnukwu ọdịnaya nke nri na nodules manganese yana mmanụ na gas gas nwere ike.
Dịka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ ebe nwere nnukwu ụdị ndụ dị iche iche nke nwere ụlọ ihe kariri umu 10.000 ndi mejuputara n 'onodu ndi a. N'ime anụmanụ ndị a, anyị na-ahụ penguins, whale, seals, squid, krill Antarctic na ọtụtụ azụ dị iche iche.
Ishingkụta azụ n’ebe ndị a na-amị mkpụrụ. N'etiti ụdị nke a na-azụkarị ọtụtụ anyị nwere hake na krill. E nwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ dị n'ókèala a: Mcmurdo na Palmer. A na-arụnye ọdụ ụgbọ mmiri ndị a n'ọdụ ụgbọ mmiri ụfọdụ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụghị mmiri niile nke Antarctic Ocean na-agagharị n'ihi ọnụnọ ice ice. Gbọ mmiri ahụ kwesịrị ịkpachara anya na ujo nke ịkụ azụ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oke Osimiri Antarctic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Antartic